Yintoni iOrchestration yoThengiso? | Martech Zone
NgoLwesine, Aprili 23, 2020 NgoLwesine, Aprili 23, 2020 Douglas Karr
Kunzima ukukholelwa ukuba ndibhale ixesha elingakanani ibhlog yam, kodwa ndiyathanda ukuba ndihlala ndibhekisa kwizithuba ezindala kube kanye ngexeshana. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ndibhale abacebisi abatsha beendaba befana kakhulu Abaqhubi bomculo:
Abaqhubi ababalulekanga njengeemvumi neengcali zaso nasiphi na isixhobo esinye; Nangona kunjalo, bayayiqonda ngokupheleleyo indlela yokusebenzisa isixhobo ngasinye, babenze basebenze kunye, kwaye benze umculo omnandi. Kubi kakhulu ukuba asizibizi ngokuba ngabaqhubi beentengiso!
Ngokukhawuleza namhlanje, kwaye intengiso yeokhestra Ngoku ligama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukuchaza indlela abathengisi abazisebenzisa ngayo iindlela ezahlukeneyo kunye namajelo okwakha ulwazi kunye nokuzibandakanya nabantu ekujoliswe kubo. Eli gama lisetyenziswa ikakhulu xa kuxoxwa Intengiso esekwe kwiakhawunti Kuba ithagethi yaziwa ngokupheleleyo kwaye emva koko uthotho lweziganeko zityhilwa ukuze zikhuphe ithemba ngohambo lwabathengi, zikhokelele kuguquko.
Nantsi indlela i-Engagio, iqonga lokuthengisa elisekwe kwiakhawunti, elichaza ngayo intengiso yeokhestra:
I-orchestration yentengiso yindlela yentengiso engagxili ekuhambiseni imikhankaso ezimeleyo, kodwa endaweni yoko yenza iseti yokunxibelelana kweendlela ezinqamlezileyo, xa zidityaniswa kunye, zenza amava abathengi ngokwahlukeneyo.
Ukuhambisa kunye nokwenza isicwangciso esiliqili sentengiso ye-omni-ayikhawulelwanga kwishishini elitsha, unokutyhala imiyalezo kunye neentengiso zokuthengisa kunye nokuthengisa amathuba, ukuvuselela, okanye ukubonelela ngeendlela zokuba abathengi babe ngabameli. I-Engagio idiliza imidlalo eqhelekileyo kwiindidi ezi-5:
Intengiso yeOrchestration Plays
Injongo kunye nokuDlala -Indlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba ufumana uninzi lwenjongo kunye nedatha yokubandakanya, yiyo loo nto igama. Zisebenzise xa umthengi onokubakho ekwisigaba sophando kunye nokufumanisa.
Ukudlala iiAkhawunti eziQinisekileyo zeNtengiso (MQA) -Isetyenzisiwe xa iakhawunti enokubakho ifikelele kwinqanaba lomsebenzi owoneleyo okanye uthethathethwano ongathanda ukuba intengiso ingene kunye nabo.
Nyikinya umthi udlala -Xa ubunethemba lokuthetha kwiNtengiso, kodwa emva koko bahambile bamnyama. Ukuyeka la mathemba kuthetha ukuyeka izivumelwano ezinokubakho, ke kufanelekile ukuba uzame ukuzibandakanya kwakhona.
IiMidlalo eziValiweyo zaWon -Abaxumi abakhoyo bayilungele imidlalo ekujoliswe kuyo ekwandiseni ixabiso eliphakathi lomthengi wakho Banokubandakanya uhlaziyo, ukuthengisa, ukuthengisa kunye nokukhuthaza abathengi.
Ukuvalwa kweMidlalo elahlekileyo -Xa isivumelwano siwela, ezi zinokukunceda ufunde ukuba wenze ntoni ukuze ungaphindi iimpazamo ezifanayo kwixesha elizayo. Banokusetyenziselwa ukubuyisa iakhawunti okhuphisana nayo.
I-Orchestration yinto enokoyikisa, kodwa akufuneki ibekhona- le ndlela inamandla kwaye ibalulekile kurhwebo oluzenzekelayo kunye nentengiso esekwe kwiakhawunti (ABM).
le infographic evela kwi-Engagio icacisa imiba eyahlukeneyo ngendlela elula yokulandela nokubonakalayo. Ngaba uvulekile ukuthumela oku? I-Engagio ingavuya ukuyila umxholo othile oza kuhamba nawo.
I-orchestration yentengiso inokuba nzima. I-Engagio ize nesikhokelo esiza kukubonisa ukuba ungawasebenzisa njani amaqela akho akhoyo kunye neenkqubo zokwenza ukuba i-ABM ibelula kwaye isebenze ngakumbi. Babandakanye nemidlalo yentengiso e-18 eya kuthi ikubonise kungekuphela indlela yokulungiselela ukuthengisa kwakho, kodwa kunye nendlela yokusebenzisa i-automation ukwenza i-orchestration ingasebenzi.
Khuphela i-Orchestration kunye nesiGaba esiLandelayo se-Automation
tags: Intengiso esekwe kwiakhawuntiintengiso yeokhestraIincwadi zokudlala ze-orchestrationkudlalaumdlalo weokhestra